निजामती सेवा दिवस र ट्रेड युनियनको भूमिका
यो वर्षको निजामती सेवा दिवस ‘निजामती सेवाको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता’ का साथ मनाइँदैछ । निजामती सेवा ऐन वैधानिक रूपमा २०१३ भाद्र २२ गते स्थापना भएको हो । लामो समयपश्चात् वि.सं. २०६१ बाट मात्र यो दिवस मनाउने शुरुवात भएको हो ।
देशको अभिभावक ऐनको रूपमा रहेको निजामती सेवा राष्ट्र समृद्धिको आधार हो । नेपालमा यस सेवामा कार्यरत जनशक्ति लगभग ८६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । दशवटा प्रशासनिक र प्राविधिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिले झण्डै तीन करोड नेपाली जनताको सेवा गरिरहेका छन् । यस सेवाको मुख्य लक्ष्य नै  सेवाग्राहीको सन्तुष्टिबाट देशको समृद्धि हासिल गर्ने हो । राष्ट्र विकासको ऐनाको रूपमा रहेको निजामती सेवा पारदर्शि, सशक्त, निष्पक्ष र चुस्त हुनुपर्ने कुरामा सन्देह छैन । यद्यपि, हाम्रो देशको निजामती सेवा र त्यसमा कार्यरत जनशक्तिबाट जनता खुशी  छैनन् । जबसम्म जनताले सन्तुष्टिको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म सेवाप्रति आस्था र विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । नेपालमा यस सेवाको भूमिकालाई हेर्दा ऐतिहासिक र स्मरणयोग्य कार्य नभएका होइनन्, तथापि सेवाप्रति आकर्षण बढ्दो र विश्वास कम हुनुमा गहिरो विश्लेषण हुन आवश्यक छ । निजामती सेवाको मूल्य र मान्यता माथि जनविश्वास डगमगाउनु उपयुक्त देखिँदैन । यस सेवालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन राजनीतिक दल, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व जनता र हामी सेवामा कार्यरत पेशाकर्मी नै जागरुक बन्न सक्नुपर्छ ।
कमजोरी कहाँ छ ?
निजामती सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी नेपालीकै रहेको  विषयमा द्धिविधा छैन । जनताले भरोसा र विश्वास गर्न लायक बनाउन नसक्नुमा कसको भूमिका र कहाँ कमजोरी रहेका छन् ? यो प्रश्नलाई मसिनो ढङ्गबाट केलाउन आवश्यक छ । निजामती सेवाको जन्मदिन राम्रा र मीठा विषय राख्नु उपयुक्त हुने भए पनि झाङ्गिएर रहेका तीता कुरालाई हटाउन प्रतिबद्धता र हिम्मत गर्ने दिनको रूपमा समेत लिन सक्नुपर्छ । यसपटकको दिवसको नाराले समेत यही कुरालाई सङ्केत गरेको छ । सेवाग्राहीबाट निजामती सेवालाई सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । सुशासन कायम गराउने नारा धेरै तयार गरिएका छन् तर व्यवहारमा उतार्न नसकिएका गुनासा निजामती कर्मचारीबाटै आउने गरेका छन् । यसर्थ, परिवर्तीत सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आउने नयाँ प्रशासनिक आयामलाई नेपालले आफ्नो परिवेशमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । जिम्मेवारी र दायित्वलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झी सेवाग्राही र देशको विकासमा समर्पण गर्ने भावनाको मानसिकता तयार गर्नु नितान्त जरुरी छ । निजामती सेवा ऐन र नियममा रहेका त्रुटी, विसङ्गतीहरूलाई हटाई न्यायोचित व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । राम्रा, योग्य र क्षमतावानलाई पुरस्कृत र विकृत मानसिकताबाट ग्रसितलाई दण्डित गर्ने कानुनलाई कडाइँका साथ पालना गर्ने साहस देखाउन सक्ने हो भने कमजोरी हट्दै जानेछन् । हाल सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्ट आचरण, ऐन र नियममा कागज मिलाएर सौदाबाजी गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी व्यक्तिगत शौख पूरा गर्न र शक्तिमा आसन्न व्यक्तिलाई पोस्ने माथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने हिम्मत गर्ने हो भने यस सेवाको छविलाई उच्च बनाउन सकिन्छ । जस्ले देशलाई लुट्न सक्छ, जसरी पनि पैसा कमाउन सक्छ, त्यसलाई स्वीकार होइन तिरस्कार गर्न सक्ने आँट समाजमा समेत हुनुपर्छ । उच्च प्रशासनिक र राजनीतिबाट संरक्षित भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्र सक्रिय र निर्ममतापूर्वक कार्यस्थलमा लाग्न सक्ने हो भने यस सेवामा देखिएका कमजोरीलाई हटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको अस्थिर राजनीतिमा सन्तुलन र दिगो सरकारको अवधारणालाई जीवन्त तुल्याउन सकियो भने निजामती प्रशासनका धेरै समस्या आफैँ समाधान हुन सक्छन् ।
मुलुक यतिबेला राजनीतिक हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । तीन तहमा रहेको सरकारको भूमिकालाई सफल बनाउन र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न यो राजनीतिक प्रणाली सफल बन्नैपर्छ । जनताको लामो प्रतिक्षा र सङ्घर्षले स्थापित राजनीतिक व्यवस्थालाई जनपक्षीय बनाउन सबै सरोकारवाला पक्ष खटिनुपर्छ । सिंहदरबारका अधिकारलाई दूरदराजमा रहेका जनताका घर आँगनमा सेवा पु¥याउन कटिबद्ध सरकारको यस कार्यलाई  मूर्तरूप दिन निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिको प्रमुख भूमिका रहने भएकाले कर्मचारीबाट निर्वाह हुने कार्यसम्पादनबाटै सही परिणाम निकाल्न सक्छौँ । निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई खटनपटनको व्यवस्थापन र स्थायी प्रक्रियाबाट समायोजन गर्ने कार्यको थालनीमा ढिलाइ भइरहेको महसुस भएको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको बाग्डोर सम्हाल्न आइसकेको भए पनि जनशक्तिको अभावले नीति र योजना निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । यसर्थ, तेरो र मेरो नगरी सरकारले वर्तमान सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको  उचित खटनपटन गर्न सक्नुपर्छ ।
निजामती सेवा दिवस मनाइरहेको यस अवस्थामा गत वर्ष निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । ट्रेड युनियन निजामती सेवाको संस्था हो भन्ने बुझाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने समस्याको समाधन गर्न सकिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन आफैँमा नीति निर्माण गर्ने निकाय होइन तर त्यसका लागि सही र उपयुक्त सल्लाह र सुझाव प्रस्तुत गर्ने कुरामा शङ्का गरिरहनुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।  ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारी यस वर्ष तयार गरिएको निजामती सेवा दिवसको ‘निजामती सेवाको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता’ भन्ने नारालाई सफलिभूत बनाउन कटिबद्ध छन् । साउन महिनामा आएको बाढी र पहिरोका कारण यस वर्ष तामझाम र हर्षोल्लासका साथ निजामती सेवा नमनाउने निर्णय भएको छ । आधारभूत कार्य स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, वृक्षारोपण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य मात्रै गरेर यो दिवसमा मनाइँदैछ । नेपालीका आसु रसाउँदा निजामतीले त्यसको मर्म बुझ्नुपर्ने र आफैँलाई आइपरेको समस्या सम्झी कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवको एकदेखि पाँच दिनको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नारालाई सफलिभूत बनाउन खोजिरहेको छ ।
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पूर्व कर्मचारी सम्मानित नगर्ने कुराले दिवसको मर्मलाई खल्लो बनाएको कर्मचारीबीच चर्चा भएको छ । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा नगर्नुले निजामती सेवाको सक्षमता माथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सक्षम र इमानदार कर्मचारी यस सेवामा नभएकै हो त ? निर्णयकर्ताले यसप्रति गम्भीर बन्नैपर्छ । यद्यपि, बाढीपहिरोको यस विपद्को घडीमा हर्षोल्लासभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने मानसिकताका साथ यस वर्षको निजामती सेवा मनाइरहेका छाँै ।